8 သည်နို ၀ င်ဘာလ7- BGR - TELES RELAY အခမဲ့ရရှိနိုင်သော iPhone အက်ပလီကေးရှင်းများကိုငွေပေးချေသည်
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ »နို ၀ င်ဘာလ 8 - BGR အခမဲ့ရယူနိုင်မည့်7အိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပေးသည်
8 သည်နို ၀ င်ဘာလ7- BGR ကိုသင်အခမဲ့ရနိုင်သည်
၎င်းသည်မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များကတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းပြည့်စုံသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးဒေါင်းလုပ်များကိုဤနေရာတွင်လည်းရယူနိုင်သည်။ သင်သည်အမြန်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက၊ သင်ဓာတ်ပုံများတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်သင်၏အဓိကအဆက်အသွယ်များကိုနေရာလွတ်ဝစ်ဂျက်တွင်ထည့်လိုပါကသင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ download ။
ဤဆောင်းပါးသည်၎င်းတို့၏ developer များကအကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့်ငွေပေးရသော iPhone နှင့် iPad အက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သည်။ BGR သည်မည်သည့် application developer များနှင့်မပတ်သက်ပါ။ သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာလွတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူး။ ဤရွေ့ကားရောင်းအားတစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်တွင်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ သိသာထင်ရှားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဤဆောင်းပါးရေးသားချိန်တွင်သူတို့သည်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် link တစ်ခုကို နှိပ်၍ "get" ဟူသောစကားလုံးအစား application တစ်ခု၏ဘေးတွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းကိုတွေ့လျှင်၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်တော့ပါ။ ရောင်းပြီးသွားပါပြီ သင် app ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆို download လုပ်လျှင် Apple သည်သင်အားအားသွင်းလိမ့်မည်။ အချို့ application များတွင် in-app ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည့်ထပ်ဆောင်းအင်္ဂါရပ်များရှိနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RSS feed မှ Subscribe သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန် e-mail ကိုတပ်လှန့်ကို ထိုအစာပမြေား၏ထုတ်ဝေအပေါ်သို့အကြောင်းကြားနှင့်ရောင်းချမှု၏ဘာမျှမလွဲချော်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် $ 1,99
သင်၏ slam dunk pixel art style simulator တွင်သင်၏ pixel များကိုအိမ်သို့ယူပါ။
- မြေပြင်အနေအထားမှအစွန်သို့လှည့်ပြန်သွားပါ၊ ထို့နောက်နယ်ပယ်သို့ထိုးပါ။
- အရာဝတ္ထုများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြင့်မားဆုံးနေရာချပြီးသိုလှောင်ထားပါ။ ပြီးလျှင်ခုန်ကျော်ကာ dunk ကိုနှိပ်ပေးပါ။
- ကြီးမားသော combo များဖန်တီးရန်နှင့် panel ကိုဖျက်ရန်သင်၏အလှည့်အချိန်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ။
AllStarSlams Pixel Jam ကို download လုပ်ပါ
Big Truck - ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲ Express ကို
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း: $ 1,99
Big Truck သည်ကစားရန်အလွန်ရိုးရှင်းသော်လည်းပျော်စရာဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်ပေါ်တွင်ထရပ်ကားတစ်စီးမောင်း။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသူတို့ ဦး တည်ရာကိုလုံခြုံစွာရောက်အောင်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ သင်သယ်ဆောင်မည့်ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့်လိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ သင်များများယူဆောင်လာလေ၊ ရမှတ်များနှင့်ဒင်္ဂါးများများများလေလေဖြစ်သည်။
ဒီဂိမ်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလှည့်တစ်ခုစီ၏အစတွင်ကုန်ပစ္စည်းအတိအကျကိုသင့်ကွန်တိန်နာတွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ သင်အရှိန်မြှင့်ရန်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ကိုထိရမည်၊ မျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ကိုနှေးနှေးစေရန်နှင့်ထရပ်ကားကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရန်အတွက်စက်ကိုစောင်းပါ။ မျက်နှာပြင်၏ထိပ်တွင်သင်၏ကွန်တိန်နာအတွင်းရှိအချိန်တိုင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့်လိုအပ်သောအဆင့်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်ကုန်ပစ္စည်းများလွန်းခြင်းမရှိဘဲအလျင်အမြန်အဆင့်၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ထိုသို့ပြုခြင်းအကြားပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ ဆုံးရှုံးရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာကုန်ပစ္စည်းအလုံအလောက်သယ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်ထရပ်ကားကိုကျော်။ မရရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ထပ်မံကြိုးစားရန်လိုလိမ့်မည်
- ညာဘက်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင် left ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Drive ကို။
- ဒါ့အပြင် Joystick ထိန်းချုပ်မှု mode ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
- ကားဂိုဒေါင်ထဲရှိထရပ်ကားများ၊ ဘီးများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အရေအတွက်တိုးမြှင့်ပါ။
Big Truck - Express Racing Mine ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် $ 1,99 ။
တိုးပွားလာသည့်အဖြစ်မှန်ကိုဆန့်ကျင်သောပထမကမ္ဘာစစ်မှကြိုဆိုပါသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိတိုက်ထုတ်, ရှင်သန်!
သင် AI စက်ရုပ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရစဉ်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ကမ္ဘာကြီးကိုလှုပ်ခတ်သွားသည်ကိုကြည့်ပါ။ သင်၏တာဝန်: သင်၏အလှည့်ကိုပြန်လည်ရယူပြီးသင်မဖျက်ဆီးမီရန်သူအားဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအမိန့်များ - လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ စူးစမ်းခြင်း၊
ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုများ - ဘယ်ဘက်ရှိ touchpad ကိုဘယ်ဘက်သို့ရွှေ့ကာညာဘက်ထိမျက်နှာပြင်ကိုဆွဲ။ လှည့်ရန်။
- ပိုပြီးပါရမီရှင်အတွက် 80 ပေါင်းစပ်ဂီတ
- ကျနော်တို့Iရာမ Robot တွေဖော်ပြခဲ့သလား!
နှင့်အလုပ်လုပ်သည်: iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7,7Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max; iPad (2017)၊ iPad (2018) iPad Pro (2017), iPad Pro (2018) ။
Botnet သည် iPhone 5S၊ iPad Air၊ Mini 2, Mini 3, iPod Touch ကိုမထောက်ပံ့ပါ။
BOT-NET ကို download လုပ်ပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် $ 0,99 ။
Filter Candy သည်အစွမ်းထက်သောရုပ်ရှင် emulation presets နှင့် editing tools များ၏စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ပုံများကိုလှပသောအရာအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တည်းဖြတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစုဆောင်းခြင်းသည်မည်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်ဘာသာရပ်အတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ဓါတ်ပုံများကို (သေးသောသေးငယ်သော၊ စပါး၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ထိတွေ့မှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်ရွှဲစသည့်) တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများဖြင့်တိုးမြှင့်ပြီးသင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်မျှဝေပါ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော: ဒီ pack ကိုလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ရေးစပ်သည်။ နှင့်စွယ်စုံ presets
ဂန္ထဝင်: တစ်စပျစ်သီးကို-မှုတ်သွင်းဗူးခေတ်ဟောင်း၏အကြည့် recreates
လက်ငင်း - ဤအထုပ်နှင့်အတူရိုးရာ Flash ရုပ်ရှင်၏အသွင်အပြင်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပါ
အနက်ရောင် - အရောင်၏အာရုံကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဘာသာရပ်နှင့်ပိုမိုခိုင်မာသောစိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးကိုဖန်တီးပါ
မာကု Sebastian အားဖြင့်ဓါတ်ပုံများ
Candy filter ကို Download လုပ်ပါ
Magic Contacts Pro သည်ဝစ်ဂျက်အသိပေးချက်စင်တာနှင့်အတူ
ပုံမှန်အားဖြင့် $ 2,99
Magic Contacts သည်သင်နှစ်သက်သော widget အဆက်အသွယ် launcher ဖြစ်သည်။ သင်နှစ်သက်သောအဆက်အသွယ်များကိုသင့်ကွန်ပျူတာမှတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးစာပို့နိုင်သည်။ ဝစ်ဂျက်ဖန်သားပြင်!
အုပ်စုလိုက်အဆက်အသွယ်များ (ဥပမာ၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ်များ) ကိုသင် စုစည်း၍ ဝစ်ဂျက်မှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဤဝစ်ဂျက်သည်ခေါ်ဆိုမှုများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ WhatsApp၊ ကြေးနန်း၊ Facebook Messenger၊ အီးမေးလ်နှင့် FaceTime တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။
သင်၏ iPhone ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေမည့်အားကောင်းသည့်ဝစ်ဂျက်ပါရှိသည်။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်သင်လုပ်စရာကောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ Magic Contact ဖြင့်သင်၏လက်ချောင်းကိုသော့ခတ်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ် home မျက်နှာပြင်မှသာဆွဲယူပါသို့မဟုတ်ချက်ချင်းရလဒ်များအတွက်မည်သည့် application မှမဆိုဝစ်ဂျက်ဖန်သားပြင်ကိုဆွဲချပါ။ သင်အကြိုက်ဆုံးများကိုအသုံးပြုပါ။
- T9 Dialer ဝစ်ဂျက်
- Notification Center ၏ခေါ်ဆိုမှုနှင့်စာသား
- WhatsApp ကို
- အမြန်ခေါ်ဆိုမှုဝစ်ဂျက်တွင် 3D သော့
- iOS9နှင့် 10 ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံသည်
Magic Contacts Pro ကို Notification Center ဝစ်ဂျက်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
1 ။ နှစ်ချက်ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားပြောင်း (Waifu 2x)
pixelation မရှိပါ၊ ဆူညံသံ၊ ပြproblemနာ၊
ပုံများအရွယ်အစားပြောင်းလဲရာတွင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရရှိရန်အတွက်လျှောက်လွှာသည်အဆင့်မြင့်အတုထောက်လှမ်းရေး algorithm ကိုအသုံးပြုသည်။
2 ။ အစီရင်ခံစာနှင့်စကေးကိုအသိပညာဖြင့်အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း (အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်၍ စကေး)
ဒီအပလီကေးရှင်းသည်ပုံ၏အချိုးအစားကိုပုံပျက်သောနောက်ခံ algorithm ကို သုံး၍ လည်းပြုပြင်လိမ့်မည်။ သင်သိမ်းဆည်းထားလိုသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသာရွေးချယ်ပြီးအစီရင်ခံပါ။ အရေးကြီးသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲသင်၏ပုံကိုအရွယ်အစားပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ Instagram ကိုပုံပြင်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
3 ။ Clear ကို (ဖြည့်စွက်အကြောင်းအရာ, Inpaint):
ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများမှမလိုချင်သောအရာများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အမှတ်တံဆိပ်။ သင့်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသောအရာမှန်သမျှကိုဖုံးကွယ်ထားပါ။
စမတ်အရွယ်အစားပြောင်း 2x Download
ပုံမှန်အားဖြင့် $ 0,99
သင်သည်မူလယန္တရားများနှင့်ဂိမ်းများကိုမစဉ်းစားတော့ပါကကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံး PHYSICAL မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းကိုဖန်တီးလိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူမိသည်။ ဒါကအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုလား။ 🙂
ဒီဆန်းသစ်တီထွင်မှုအယူအဆမှာအကောင်းဆုံးမျှော်စင်ကာကွယ်ရေး၏စက်ပြင်များကိုရူပဗေဒအခြေခံဂန္ထဝင်ဂိမ်းများ၏ဒိုင်းနမစ်နှင့်ရောနှောထားသည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းကိုထူးခြားသောအနက်ကိုပေးရုံသာမကကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရသောပျော်စရာဖြစ်စေသည်။  အခြားမည်သည့်ဂိမ်းတွင်မျှနောက်ခံသည်ဤနေရာတွင်ကစားသကဲ့သို့အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္hasတွင်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာမြေထုဆွဲအားနှင့်ကာယခွန်အား၏ရန်သူနှင့်သင်၏ကာကွယ်ရေးအပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အရေးကြီးလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံရန်သူများ၏ကြိုတင်ကြံစည်မှုကိုအာရုံပြုပြီးသင်သူတို့ကိုတားဆီးရမည်ကိုမေ့သွားခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။
နည်းဗျူဟာပရိတ်သတ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေနေသူများကသင်၏လှည့်ကွက်များကိုနေရာချထားရန်မလုံလောက်သောကြောင့်ပျော်စရာကောင်းမည်မှာသေချာသည်။ နှင့်အဆင်ပြေဖြစ်, သင်၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ရမည်!
- အတွက်3ဂိမ်းစနစ်များ
- သင်၏အကာအကွယ်များသည်ရန်သူများ၏ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်သော Infinite mode များ။
-2အထူးအဆင့်များ၊ သင့်ကိုဂိမ်းပြောင်းရန်လိုအပ်ပြီးသင့်အားစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
- သင်၏နည်းဗျူဟာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်ထူးခြားသည့်အလှည့်များနှင့်တိုးမြှင့်မှုများ6အမျိုးအစားများ။
- သင့်အတွက်အလွန်ခက်ခဲစေမည့်သူဌေးများအပါအဝင်မတူညီသောလက္ခဏာများရှိသော 20 ရန်သူများများ။
- 45 ၏အောင်မြင်မှုနှင့်မည်သူသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်လှုံ့ဆော်မှုခံရမည်။
- ရန်သူ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်အထူးစွမ်းအားများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များပါသောစွယ်စုံကျမ်းကို အသုံးပြု၍ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာသည်။
- သင်သည်ကြော်ငြာများမပါဘဲ၊ အပြည့်အ ၀ ဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုမျက်နှာပြင်များမပါဘဲ၊ ဂိမ်းအပြည့်အစုံကိုသင်ရရှိသည်။
- သင်၏ထူးခြားသောရသဗေဒ ... သင်၏သံခမောက်ကို တင်၍ SOS ကာကွယ်ရေးတွင်နှစ်မြှုပ်ပါ
SOS Defense ကို Download လုပ်ပါ
Twitter အတွက် Tweety Pro ဝစ်ဂျက်များ
Tweety ဖြင့်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကမ္ဘာကိုအလျင်အမြန်သိရှိနိုင်ရန်သင်၏ Twitter timeline, ဖော်ပြချက်များ၊ စာများနှင့်သင်၏စာရင်းများကိုသော့ခတ်မြင်ကွင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အက်ပ်တွင်မဆိုကြည့်ပါ။
Tweety သည်သင်၏ Twitter အကြောင်းကြားစာတွင် Twitter ဝစ်ဂျက်ထည့်သည်။ သို့မှသာသင်အသုံးပြုနေသောအက်ပလီကေးရှင်းမှထွက်ခွာရန်မလိုပါသို့မဟုတ်သင်၏ထုတ်လွှင့်မှုကြည့်ရှုရန်သင်၏ကိရိယာကိုသော့ဖွင့်ရန်ပင်မလိုတော့ပေ။ သငျသညျ, ပင်ဝစ်ဂျက်ကနေ bookmark, ပြန်လည် tweet သို့မဟုတ် tweet ကို default Twitter application ကို / Tweetbot / Twitter မှာဖွင့်နိုင်ပါတယ်!
Tweety ဖြင့်သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးသောသတင်းများ၊ အချက်အလက်များ၊ ကိုးကားချက်များ၊ ထောက်ခံချက်များနှင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသင်၏စက်ပစ္စည်းကိုသော့ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုနေသောဂိမ်း / အက်ပ်မှထွက်ရန်မလိုဘဲနှင့်ကြည့်နိုင်သည်။
သင်ထင်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်တွေ့ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား application ဖြစ်သော Widget - Magic Launcher ကိုစစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့်။
Twitter အတွက် Tweety Pro ဝစ်ဂျက်များကို download လုပ်ပါ
Image ကိုရင်းမြစ်: App Store မှာ
ဤနှိုးစက်နာရီသည် Philips မှ 140 $ နှင့်ဆင်တူသော်လည်း 20 $ - BGR ၏စျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချသည်။
Amazon ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Wi-Fi အကွာအဝေးကို 15 $ - BGR သို့ပြန်ပေးသည်
ပြင်သစ်အသင်း - EdF - Mbappé၏ကံကြမ္မာသည် Benzema နှင့်ဆက်စပ်နေသလား။ - ခြေနင်း 01
သူသည်ဤအပတ်တွင် Netflix နဲ့မှအသစ်ဖြစ်၏အားလုံးနှင့်အရာကြွင်းလေ (နိုဝင်ဘာလ 17 ၏အပတ်က) - BGR
အကောင့်မျိုးစုံဖြင့် Instagram အကောင့်မျိုးစုံကိုစီမံပါ - သိကောင်းစရာများ
ယူဂူဂိုဟူဂို All-Only သားကောင်
တော်ဝင်အကျပ်အတည်းလော ဘုရင်မ & 039 ရှိပါတယ်; ထိန်းချုပ်မှု & # 039 ဆုံးရှုံးခဲ့ရ; ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်၏တော်ဝင်အတွင်းလူများအရသိရသည်
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,621